Xabad iibso (Somalia), Xabada kalena bilaash ku hel (Somaliland ) !
Weedha "Xabad iibso, xabada kalena bilaash ku hel " (Buy one, get one free ) waa hannaan ganacsi oo si xawli ah looga isticmaalo guud ahaan galbeedka, gaar ahaan waddankan Mareykanka. Min sharikadaha iibiya qalabka korontada ku shaqeeya (Electronics ) ilaa iyo kuwa makhaayadaha cuntada fudud, waa istiraatiijiyad ganacsi oo si faa'iido badan ugu soo hanti xareysa shirkadaha.
Hadaba, mar mar beey istiraatiijiyadani noqon kartaa mid hanaan bulshadeed ama siyaasadeedba loo isticmaali karo. Gaar ahaan markaad ku yara fikirtid qaab dhismeedka siyaasadeed ee Somalia iyo Somaliland-ba. Afeef waxaa iga ah inaan cidna aqoonsi ama aqoonsi la'aan siineyn. Waxaan uun isku dayayaa inaan bal istiraatiijiyadan ku dhaqan galiyo siyaasad maalmeedka labadan gobol ee Somalia & Somaliland.
Somaliyada koonfureed wexeey maanta u kala qeybsantahay gobollo eey ka seedcaleeyaan qowleysatto eegta danahooda gaarka ah. Waxaa si joogto ah u dhaca isku dhacyo beeleed oo aalaaba salfada nafyaalo aan wax danbi ah oo eey galabsadeen jirin, ineey Somali yihiin mooyee. Magaala madaxdii dalka waxaa ka aloosan qas iyo kala danbeyn la'aan, taas oo sidoo kale horseed u ah ku dhawaad dhamaan xasilooni la'aanta dalka ka jirta. Sidaas awgeed, Hadii dadka nuxurka leh ee u dhashay gobolladan qasku ka taagan yahay, gaar ahaan caasimadda Muqdisho eey "iibsadaan" xallinta muranada jira, iyagoo markaas ku soo dabbaalaya goboladan, Nabadgalyo, Kaladanbeyn, deedna u hormuudaya nidaam siyaasadeed oo u dhigma kan imminka Somaliland ka jira, waxaa hubaal ah ineey markaas "Xabada kale " ee Somaliland si bilaash ah ku heli karaan. Taa waxaan ula jeedaa; wexeey si fudud ku soo xero galin karaan Somaliland. Marnaba ma suuroobeyso in Somaliland u hana-qaado ineey markale si iskeed ah isaga soo biirto walaasheed Somaliya. Iyadoon laga arag Soomaliyada koonfureed. Waa siyaasad xumo in Somaliland laga canaanto banaanada iyo madasha shirku ka socdaba, iyadoo markaas lagu dhaleeceynayo ineey "Goosi doon" yihiin. Waar hadaaneey Goosi-doon noqon, halkee ka horeyso oo eey ku soo biiraan ? Aan woxoogaa yar runta isu sheegno. Bal marka hore dhibka na heysta aan meel soo wada dhigno, kadib ayaan gorgortan iyo tuugtan gali karnaaye. Madaxweynihii hore ee Somaliland, Mr.Cigaal inbadan buu si aan dawaali aheyn taa u bidhaamiyey ".. Waxba kuma jabna inaan lacag wadaag ama socdaal wadaag noqono " ayuu bari BBC-da u sheegay, isagoo markaas ka jawaabayey su'aal aheyd; bal waxa uu koonfur la wadaagi karo hadii xukuumad loo helo.
Dhanka kale, Somaliland waa gobollo aayohooda ka tashaday. Wexeey garteen in bari lagu raadsan jiray dadka eey yihiin awgeed. Waa dad lagu baab'iyey millatarigii qaranka, isla markaana inta cid dagaallanta loo waayey loo soo kireystay calooshood u shaqeystayaal. "Qofkii dhibka kaaga horeyey, dheeftana kaaga horeeyee", Somaliland wexeey ugu danbeeyn higsatay dimoqoraadiyad eey Africa iyo Muslimiintuba la'ayihiin. Sanaadiiqda codbixinta ayaa lagu kala baxay. Woxoogaa Bushi ahi meel walba wuu jiraa, ha yeeshee wax la tilmaami karo ma jirin.
Somaliland Marnaba kuma soo biirayaan Somalida kale illaa laga hubiyo dhowr qodoboo xasaasi ah:
(a) Damaanad qaad qoraal ah oo qeexaya inaaneey dowladda dhexe ku duuli karin gobol mucayan ah.
(b) Damaanad qaad rasmi ah oo qeexaya isu dheelli tirnaan awood qeybsi.
(c) Axdi oggolaanaya in gobol walbaayi aayihiisa ka tashado, isagoo ku hoos jira dowladda dhexe (Federal)
(d) Raalli gareyn iyo usoo hoyasho qaran oo Somaliland loo fidiyo, loogana tacsiyeeyo xasuuqii naxariis darrada ahaa ee loo geystay, iyadoo isla markaana danbiyo dagaal lagu soo oogayo inta ka nool kuwii soo dabaray waxashnimadaas.
Qodobadaas iyo kuwa kaleba waxeey udub dhexaad u noqon doonaan bohoobid rasmi ah oo ka dhex dhacda labada ummadood ee walaalaha ah.
Waxba yaanan 26-ka June iyo 1-da July muqadasnimadooda iyo la'aanteeda waqti leysaga dhumin. Ninkii u arka ineey "maalmo madow" ahaayeen, dabcan docdiisa ayuu ka soo eegay. Kan leh "Maalin weyn " ayeey aheydna, sidoo kale dhankiisa ayuu ka eegay. Isku soo duuboo, Muhimadu waxa weeye Somaliya kama maaranto Somaliland, Somaliland-na kama maaranto Somaliya. Hadii guriga hooyada weyn xal loo helana, waxaa xal loo heli karaa dhamaan guryaha odayga oo dhan, oo Somaliland ugu horeyso. Laakiin ma arko ineey sina muhiim u tahay in waqtigan la joogo laga hadlo Somaliland oo ka soo qeyb gasha shirar aan dhamaad laheyn. War bal aan xoogaa isku xishoono oo aan xushmeyno xaragada xirfadeysan ee Somaliland.